कसरी ह्वाइट हाउस र पेन्टागन भ्रमण गर्ने यात्रा समाचार
कसरी ह्वाइट हाउस र पेन्टागन भ्रमण गर्ने
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, वाशिंगटन
संयुक्त राज्य अमेरिका यो धेरै ठूलो देश हो तर सिनेमा र टेलिभिजनका लागि धन्यवाद त्यहाँ केहि प्रतिष्ठित स्थानहरू छन् जुन पर्यटकहरू जहिले पनि जान चाहान्छन्। हामी एक ठूलो सूची बनाउन सक्छौं, तर यो मलाई लाग्छ कि आजको लेखको शीर्षकमा रहेका दुई साइटहरू शीर्ष पाँचमा छन्, ठीक छ?
La कासा ब्लान्का यो अमेरिकी शक्तिको सिट हो, कम्तिमा त्यो हलिउड र कसरी हो पेन्टागन यो महत्वपूर्ण सैन्य निर्णय को एक रहस्यमय साइट जस्तै छ। के तपाई संयुक्त राज्य जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसैले म यहाँ छु यी दुई उत्कृष्ट टूरिस्ट भिजिटहरू गर्दा तपाइँलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा
1 ह्वाइट हाउसको भ्रमण गर्नुहोस्
2 पेन्टागन भ्रमण गर्नुहोस्
ह्वाइट हाउसको भ्रमण गर्नुहोस्
ह्वाइट हाउस यो संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिको आधिकारिक निवासस्थल हो जबकि उनको अवधि रहन्छ, तर वाशिंगटन डीसी भ्रमण गर्नेहरूले अमेरिकी इतिहास र संस्कृति सिक्नको लागि भ्रमण गर्न सक्दछन्। धेरै छोटो समय पहिले सम्म, तपाईं तस्वीरहरू लिन सक्नुहुन्न, निराशाजनक केहि भयो, सहयोगी भए पनि, तर गत वर्ष बाहिर जाने पहिलो महिला मिशेल ओबामाले फोटोहरु अधिकृत गरे प्रसिद्ध ह्वाइट हाउस टूरमा।
हो, नयाँ प्रविधिहरूले यस मुद्दामा धेरै दबाब दिएका छन्, तर उनीहरूले हामीलाई चरम सुरक्षाका उपायहरू पनि गर्न बाध्य पारे। आजकल फोटोहरू पर्यटकहरूले घर भित्र लिन्छन् व्हाइटहाउसटाउ ह्याशट्यागको साथ सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गर्न सकिन्छr त्यसोभए तपाइँ कसरी व्हाइट हाउसको निर्देशित भ्रमणका लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ? पहिलो तपाईंले आरक्षण गर्नु पर्छ र तपाइँसँग गर्न यो गर्न छ महिना पहिले छ र तीन हप्ता भन्दा कम।
भ्रमणको लागि अनुरोध तपाईंले यो वाशिंगटनमा तपाईंको देशको दूतावास मार्फत गर्नुपर्छ। तपाईंले सम्पर्क जानकारी, मिति र तपाईंको समूह बनाउने व्यक्तिको संख्या छाड्नु पर्छ। गाईड टुरहरू बिहान :7::30० देखि बिहान ११::11० सम्म, मंगलबार बिहिबार र शुक्रबारदेखि शनिबार बिहान :30::7० बिहान १::30० बिहानसम्म लिन्छन्।.
त्यहाँ वस्तुहरू छन् जुन तपाईं प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्न ह्वाइट हाउसमा: क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, खाना, पेय, सिगरेट वा पाइप, तरल पदार्थ, जेल, लोशन, हतियार, चाकू वा तीखा वस्तुहरू, ब्याकप्याक्स, सुटकेसहरू, वालेटहरू, आदि। तपाईं यी सबै चीजहरू नजिकैको होटेलहरूमा, लोकरहरूमा छोड्न सक्नुहुनेछ जसको लागि उनीहरूले थोरै शुल्क लिन्छन् तर एकचोटि तपाईंले छोड्नु भएपछि सबै चीज हातमा छ। ह्वाइट हाउससँग कुनै लाकर छैनहो होटेलहरू र युनियन स्टेशन जो नजिक छ। हो, तपाईं कुञ्जीहरू, वालेटहरू, मोबाइल फोन र छाताहरूका साथ प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले माथि भनेंं, गत बर्षदेखि तपाई कॉम्प्याक्ट क्यामेरा र स्मार्ट फोनको साथ फोटो लिन सक्नुहुनेछ। कुनै भिडियो रेकर्डि। छैन र सेल्फी स्टिकहरू अनुमति छैन. भ्रमण आधा घण्टासम्म रहन्छ एक पटक तपाईं सुरक्षा मापन पास। तपाईं धेरै कोठाहरूमा जानुहुन्छ तर तपाईं निवासको त्यस ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न जहाँ राष्ट्रपति र उनको परिवार बस्ने, वा प्रसिद्ध ओभाल कोठा र वेस्ट विंग। हो, त्यहाँ जताततै गुप्त सेवा एजेन्टहरू छन् र तिनीहरू प्रश्नहरूको उत्तर दिन अधिकारिक छन् ताकि तपाईं तिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुनेछ।
व्हाइट हाउसमा कसरी पुग्ने: निर्देशित भ्रमणका लागि प्रवेशद्वारको सब भन्दा नजीकको स्टेशन मेट्रो सेन्टर हो (१th औं स्ट्रिट निकास)। जब तपाईं एस्केलेटरको शीर्षमा पुग्नुहुन्छ, १th औं स्ट्रिट दक्षिणी निकास लिनुहोस्, ई स्ट्रीटको दाँया मोड्नुहोस् र सिधा १th औं स्ट्रिटमा जानुहोस्। यदि तपाईंले कुनै भ्रमणका लागि साईन अप गर्नुभएन र तपाईं आफैं जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले आउनु पर्छ। यो १th औं सडकमा कतार फाराम गर्दछ।
ह्वाइट हाउस भिजिटर सेन्टर व्हाइट हाउसबाट केहि ब्लाकहरू छ र भेट्न लायकको छ। यो पुनःस्थापित गरिएको छ, यसको नयाँ प्रदर्शन व्हाइट हाउस ऐतिहासिक संघ द्वारा प्रदान गरीएको लगभग objects ० वस्तुहरू मिलेर बनेको छ र तीमध्ये धेरैलाई कहिल्यै प्रदर्शन गरिएको छैन। त्यहाँ फ्र्यान्कलिन डी। रुसवेल्टको डेस्क छ, उदाहरणका लागि, र एक धेरै रोचक १-मिनेटको भिडियो पनि अनुमान गरिएको छ कि उही यात्राको अघि हेर्नु राम्रो हो।
सम्पूर्ण भ्रमण एक घण्टा आधा हुन्छ। यो साइट क्रिसमस, धन्यवाद र नयाँ वर्ष बाहेक हरेक दिन am: except० देखि साँझ7बजेसम्म खुला छ प्रवेश नि: शुल्क छलाई एक उपहार पसल छ र त्यहाँ ओभल कोठामा राष्ट्रपति डेस्कको प्रतिकृति छ जहाँ तपाईं फोटो लिन सक्नुहुन्छ। अन्तमा, यदि तपाईको यात्रा एकदमै छिटो छिटो छ भने म तपाईलाई भन्छु कि १ डिसेम्बरमा ह्वाइट हाउस क्रिसमस ट्रीका बत्तीहरू औपचारिक रूपमा सकृय हुनेछन्।
व्हाइट हाउस को यात्रा नि: शुल्क छन्।
पेन्टागन भ्रमण गर्नुहोस्
पेन्टागन वाशि Washington्टन DC भन्दा बाहिर अवस्थित छ, अर्लिtonटनमा। यो बारेमा छ ब्यारेक्स जीसंयुक्त राज्य अमेरिका को रक्षा विभाग को सामान्य y यो निर्देशित पर्यटनको लागि खुला छ।
यी निर्देशित भ्रमणहरू तिनीहरू यात्रा अघि १ days दिन सम्म बुक गर्न सकिन्छ र 14 ० दिन भन्दा बढि अग्रिम। हुन्छ सोमबार देखि शुक्रबार सम्म, बिदा बाहेक, बिहान9देखि साँझ3सम्म। समूहहरू धेरै चाँडै भर्दछन् यदि तपाईं भ्रमण गर्ने विचार चाहनुहुन्छ भने तपाईंले पहिले बुक गर्नु पर्छ। विदेशीहरूको लागि आवेदन दूतावास मार्फत हुनुपर्दछ.
निर्देशित टुरहरू अन्तिम एक घण्टामा र दुई किलोमिटर कभर गर्नुहोस् यो जिज्ञासु भवन भित्र जुन संसारको सब भन्दा ठूलो हो। अमेरिकी सेना विभाजित चार शाखा को इतिहास तपाईंलाई वर्णन गरिनेछ र तपाईं पनि सेप्टेम्बर ११, २००१ पछि बनेको आन्तरिक स्मारकको भ्रमण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। त्यहाँ एउटा नामक चैपल र नायकहरूको हलको नाम हो। मरेका
पेन्टागनमा त्यहाँ कुनै पार्किंग छैन तपाईं सार्वजनिक यातायात द्वारा आउनु पर्छ। सब भन्दा नजीकको स्टेशन सबवेको सुन्तला रेखामा पेन्टागन हो, तर यदि तपाईंसँग कार छ भने तपाईं यसलाई पेन्टागन सिटी मल्लमा पार्क गर्न सक्नुहुन्छ र पाँच मिनेट पैदल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ जुन यसलाई पैदल टनेलको माध्यमबाट सैन्य भवनबाट अलग गर्दछ। आगन्तुकहरूको प्रवेशद्वार प्रवेशद्वार नजिकै रहेको पेन्टागन यात्रा विन्डो मार्फत गरिन्छ।
तपाईंले पुष्टि गर्नुपर्दछ वा कम्तिमा एक घण्टा अघि जाँच गर्नुहोस् अनुसूचित गरियो किनकि तपाईं सुरक्षा उपायहरू पार गर्न र आरक्षण पुष्टिकरण कागजातहरू र राहदानीहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। ठूला झोला वा ब्याकप्याक वा मोबाईल, क्यामेरा वा उपकरणहरू अनुमति छैन इलेक्ट्रोनिक अर्को प्रकृति को। भित्री भ्रमण पछि, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि तपाई वरिपरि हिंड्नुहोस्, जुन 11/XNUMX मेमोरियल छ, संकेतका पछि लाग्ने दश मिनेट हिंड्छ।
एउटा यात्रा, एक शहर, दुई उत्कृष्ट भ्रमणहरू।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » वाशिंगटन » कसरी ह्वाइट हाउस र पेन्टागन भ्रमण गर्ने
एथेन्स शहर मा के हेर्ने
भ्याटिकन शहरको भ्रमण गर्नुहोस्